EGLAND : Kabtankii Qaranka Kubadda Cagta Egland John Terry oo Kabtanimadii laga xayuubiyay
February 3, 2012 7:41 pm GMT - Written by Editor - Edited by Editor
Egland:-Kabtankii Kooxda Kubadda Cagta ee dalka Egland John Terry ayaa Ururka maamula Kubada Cagta ee dalkaasi Football Association (FA ) ay maanta (Jimce) ay Kabtanimadii ka xayuubiyeen John Terry iyada oo ay ugu wacan tahay Maxkamad ku socota kadib markii lagu eedeeyay in uu Cunsuriyeeyay laacibka u ciyaara Kooxda QPR Anton Ferdinand .
John Terry oo laga qaaday Kabtanimadii Qaranka Egland
John Terry, ayaan hogaamin doonin Ciyaarta saaxiibnimo ee ay 29-ka Feb, la ciyaarayaan dalka Holland iyo Ciyaaraha Yurub ee bartamaha Sanadkan.
FA, waxay sheegeen macalinka Kubadda Cagta ee Egland Fabio Capello uu isagu go’aankeeda uu leeyahay in uu ku daro Kooxda la ciyaaraysa Holland iyo waliba Kooxda ka qayb qaadan doonta Ciyaaraha Yurub, waxaa kaloo uu Fabio Capello uu go’aankeeda leeyahay magacaabida Kabtanka Cusub ee badalaya Terry.
Macalinka Kooxda Chalsea Villas-Boas ayaa waxa uu sheegay in uu isagu ka qaadi doonin Terry Kabtimada uuna Kabtan u sii ahaan doono.
John Terry ayaa Maxkamadiisa la qaadi doonaa 9-julay kadib Cayaaraha Yurub.
Laacibka loo magacaabi doono Kabtanka Egland ayaan si cad loo saadaalin karin waxaana goor horaba ka soo horjeedsaday in uu badalo Terry Xidiga Man U Ferdinand oo horay u badalay Terry walaalona ay yihiin Anton Ferdinand oo ah ninka lagu eedeeyay Terry in uu cunsuriyay.
Laacibiinta loo saadaalinayo in ay badalaan Terry ayaa waxaa ugu horeeya Steven Gerrard, Scott Parker iyo Frank Lampard.